ECommerce uye Online Kushambadzira Congress musi waMay 6 muValencia | ECommerce nhau
Congress yeCommerce uye Kushambadzira Kwepamhepo kunotevera May 6 muValencia
Eva Maria Rodriguez | | eCommerce, Zviitiko, Kutengeswa kweIndaneti
Inotevera May 6 ichaitika eRoadshow Valencia nekubata ECommerce uye Online Kushambadzira Congress umo mune dzimwe nyanzvi dzakakurumbira muchikamu ichi dzichasangana. Kubva na9 mangwanani kusvika 2 masikati kuchave nemisangano nemakakatanwa umo nyaya dzakasiyana dzekufarira kukuru uye kufarira kune vese kuchakurukurwa. Uye zvakare, masikati pachave neinonakidza kwazvo masterclass.
Muchiitiko ichi, misoro senge yekuwana hit mu online kushambadzira zano, iyo nzira yekushandura vashanyi kuva vatengi kana nzira yekugadzira uye kunatsiridza chitoro chepamhepo, pakati pevamwe.
El eRoadshow Valencia 2014 ichave nekutora chikamu kwevamwe "hove dzakakora" yeakatanhamara eCommerce uye Online Kushambadzira panorama.
Mukutaura, aya ndiwo mataurirwo akasimbiswa:
Gerardo Cabañas, Managing Director pa Autoscout24
Alex Vallbona, Managing Director we Bichbox
Miguel Tena, Kushambadzira Manager we Tinya Tap
Camilo Majarón, Glogal Mazuva ese Deal ye Letsbonus
Diego Marcos, CCO ye PayTpv
Gorica vukojicic, Mutariri Wenyika e-goi
Guillermo Garcia, CEO we mishonga
Inma Anglada, Musoro weMusika Kuunzwa kwe V.me neVisa
Javier Gayoso, Mutungamiriri we Spotify
Salvador Suarez, Kugadzirisa Partner weTerritorio Creativo
Javier Gorriz, Area Manager we MRW
Enrique San Juan, Nharaunda Director Nharaunda yeInternet
Ruben Calvo, Kushambadzira Director we MDirector
Jordi Pascual, ECommerce Director we Banco Sabadell
Adrián Mañez, CEO we Ozone
Michael Smit, Director weKushambadzira & Kutengesa ku Fruzzel.com
Jose Carlos Agrela, Bhizinesi Rekuvandudza & Dhijitari Strategic pa InternetAcademy
2 Mutengo uye kunyoresa
Na9 mangwanani mabvumirwo achaunzwa. Na9: 30 mangwanani, mhemberero yekugamuchira ichaitika nemunhu anotarisira Valencia Chamber of Commerce.
Mharidzo yekutanga ichaitika na9: 40. Gerardo Cabañas (Autoscout24) achataura nezvenyaya yekubudirira kwekambani yake uye nezve «Shanduko yekutengesa pamotokari pamhepo». Inotarisirwa kupedza maminetsi makumi matatu.
Zvino, na10: 10, Javir Gayoso (Spotify) naSalvador Suárez (Territorio Creativo) vachapa hurukuro paSocial Media yakanzi "Dambudziko rezvigadzirwa mumasocial network uye multichannel". Iyi hurukuro ichagara maminetsi makumi matatu.
Na10: 40 Inma Anglada, (V.me neVisa Europe) ichapa hurukuro pa mashandisiro anoita zvikwama zviri kuchinja mashandisiro atinoita online uye ichapa kubheja kweVisa kumakambani, vatengi uye masangano emari: V.me neVisa.
Mushure meiyi hurukuro, inozotora hafu yeawa, pachave nekuzorora kwemaminetsi makumi maviri.
Na11: 30 iyo Letsbonus kubudirira nyaya, uye vachataura nezvekuti kambani iyi yakafamba sei kubva pakuve inotenga pamwe chete kutanga-kumusoro kusvika pakuva musika wakazara nesarudzo yezvinopfuura 2000 zvirongwa, nzendo uye zvigadzirwa. Camilo Majarón (anobva kuLetsbonus) ndiye achange achitungamira hurukuro iyi, inozotora maminetsi makumi maviri.
Yokutanga gakava yezuva ichaitwa na11: 50. Kwemaminetsi makumi mana Rubén Calvo (Mdirector weiyo Antevenio Boka), Gorica Vukojicic (E-goi), Michiel Smit (Fruzzel.com) naAdrián Mañez (Ozongo.com), pasi pe moderation yaEnrique San Juan (The Social Media Company) vanoita nharo pamusoro "Maitiro ekumhanyisa yakanaka online kushambadzira mushandirapamwe". Kubva pane zvavakaona, vachabata nemapoinzi akadai seanotevera:
Ndezvipi zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa usati watangisa mushandirapamwe weemail wekushambadzira?
Iwo maSynergies Pakati Pekutengesa Kwepamhepo Uye Kushambadzira Kwechinyakare - Kukanganisa Uye Mikana Paunobatanidza Mikana
Ndingaite sei kubatanidza chitoro changu chemuviri mudhijitari zano?
Maitiro ekushandura bhizinesi rangu zvinobudirira?
Tingawana sei SEO yakanaka? ¿
Pane here madhiri ekuti uwane SEM irinani?
Ndeapi marudzi emakambani ekushambadzira epamhepo anonyanya kushanda?
Ndingaite sei yakanaka Performance Kushambadzira chirongwa? SEO Kune ecommerce.
Mushure mekukakavadzana, na12: 30 pm Jordi Pascual Guerrero (Banco Sabadell) achapa hurukuro paCommerce yakanangana nenyaya inokosha. "Kubhadharisa kutenga e-commerce hakusi kungoisa POS chaiyo."
Mushure meizvi mharidzo gakava rechipiri rezuva iri richaitwa, panguva ino paCommerce. Jordi Pascual Guerrero,
Javier Górriz (MRW Spain), Alex Vallbona (Birchbox Spain), Diego Marcos, (PayTPV) naGuillermo García Hernando (Onestic), pasi pekutarisirwa kwaEnrique San Juan vachakurukura nezve «Zvinhu zvekufunga nezvazvo paunenge uchigadzira eCommerce ». Ivo vachakurukura zvinoitika mu e-commerce nhasi uye anotevera mapoinzi:
Ndeapi matanho andinofanira kutevedzera kugadzira yangu eCommerce?
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzandinogona kupinza muecommerce yangu?
Ndeupi mhando yezvigadziriso izvo mutengi wangu anoda kwandiri?
Ini ndinofunga nezve zvazvino maitiro evatengi?
Iwo anoshanda sei iwo mapeji ekuenzanisa emutengo?
Ndingaite sei kuti ndiwane mamwe mapeji ekukurudzira ecommerce yangu?
Zvino, na13: 30 masikati, mharidzo yekupedzisira yemangwanani ichaitika naMiguel Tena (Tap Tap Networks), achataura nezveMobile. Hurukuro yake ine zita rinotevera: "Maitiro ekukanganisa mutengi anotevera kuburikidza nharembozha".
Masikati pachave ne masterclass pane digitization neISDI. Kubva 15:30 uye kwemaawa matatu Jose Carlos Agrela (InternetAcademy) ichataura nezvazvo "Maitiro ekuti titange chirongwa chedigitalization neSocial Media chirongwa". Muchikamu chino, vatori vechikamu vanodzidza makiyi makuru ekutanga chirongwa che digitization mukati mekambani yavo yebhizinesi uye kuronga nekuvandudza chirongwa cheSocial Media.
Mutengo uye kunyoresa
Kutora chikamu muchiitiko ichi kune mutengo we 20 €.
Kunyoresa uye kuwana rumwe ruzivo shanyira iyo yepamutemo webhusaiti yezviitiko ERoadshows
Mufananidzo - Ozongo.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zviitiko » Congress yeCommerce uye Kushambadzira Kwepamhepo kunotevera May 6 muValencia
Kushambadza neWhatsApp, kushambadzira kuburikidza nemeseji mutengi